सेतॊ जुत्तामा हीलॊ त लागेन नि माननीय बद्रि मनैली ज्यू ? - अभियान खबर
सेतॊ जुत्तामा हीलॊ त लागेन नि माननीय बद्रि मनैली ज्यू ?
निरञ्जन बजगाई नुवाकोट
कृषिप्रधान देशमा कसैले साँच्चिकै हिलाम्मे भएर रोपाइँ गरे त कसैले सामाजिक संजालमा फोटो राख्नका लागि मात्रै भए पनि नाटक गरे ।
कृषिमा नेपालको परनिर्भरता बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा सरकारले यथोचित सिँचाईको व्यवस्था गर्न नसकेको र सबैभन्दा बढी खपत हुने धानका लागि प्रवन्ध गर्न नसकेको आरोप लागेकै छ ।
त्यसमाथि अहिलेको कम्युनिष्ट सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा आधुनिकताका नाममा चर्तिकला गर्दै आइरहेको देखिँदै छ ।
त्यसमाथि आफूले आफैलाई ब्यंग्य गर्ने गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का माननीयले देखाएको हर्कत भने क्षमायुक्त हुन सक्ने अवस्थाकै छैन ।
ती पात्र हुन् माननीय बद्रि मनैली । उनले चुनावका बेलामा धान चुट्दै गरेको फोटो राखेर चर्चा बटुलेका थिए । अहिले फेरि त्यस्तै चर्चा बटुलेका छन् –नकारात्मक चर्चा
सामान्यतया रोपाइ गर्दा हिलो हुन्छ । हिलोमै धानको बीउ रोप्ने हो । तबमात्र रोपाइ हुन्छ ।
हिलोदेखि डराउनेले कहिल्यै हिलोदेखि डराउनेले कहिल्यै पनि रोपाइ गर्न सक्दैन ।
उनले खेतको आलीमा उभेर रोपेको धानमा सेतॊ जुत्ता लगायर रोपाइ गर्दै गरेको फोटो सामाजिक संजालमा ।
बालुवाटारमा पूर्वएमालेको बैठक, विदेश र संगठन विभाग टुंगो लाग्यो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पूर्वएमालेको बैठक बसेको छ । विभागको नेतृत्वको गृहकार्यका लागि बिहीबार राति बैठक बसेको र केही विषयमा समझदारी जुटेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए । उनले के कुरामा सहमति जुट्यो भन्ने खुलासा भने गरेनन् । “केही गृहकार्य भएको छ, पाँच गते घोषणा गर्छौं,” उनले भने । स्रोतका अनुसार पार्टीको […]
Posted on February 9, 2019 Author abhiyaan
काठमाडाैं – आगामी आइतबारदेखि देशैभर मौसम सफा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । गत मंगलबारदेखि पश्चमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव देखिएपछि देशैभर वर्षासँगै हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भइरहेको छ । शनिबार काठमाडौं उपत्यकासहित पूर्वी क्षेत्रमा हलुकादेखि मध्यम वर्षा हुन सक्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् वरुण पौडेलले जानकारी दिए । पश्चिमी क्षेत्रमा भने बिहान सामान्य […]